Mesh silig ahama
Qalabka mesh silig gaar ah
Shaandhayso Shaashadda mesh Silig
Mesh Wire silig
Mesh silig dahaarka leh
Ahama Steel Alxanka Wire mesh
Ma taqaanaa shaqooyinka waaweyn ee shaashadda birta
by admin on 21-08-24
Shaashadda birtu waxay leedahay afarta hawlood ee soo socda: Baadhitaan: waxaa inta badan loo adeegsadaa walxaha adag, budada iyo baadhista macdanta, dhuxusha, caagga, batroolka, warshadaha kiimikada, farmashiyaha, baabuurta, dhoobada, dhalada iyo warshadaha kale. Ilaalinta: waxaa inta badan loo isticmaalaa dhismaha madaniga ah, ba ...
Halkee ayaa si weyn looga isticmaalaa mesh silig birta ah
Mesh birta birta ayaa si weyn loo adeegsadaa, gaar ahaan gidaarka dhismayaasha, markaa sida loo rakibo qalabka. Waxa ugu horreeya waa in la dhigo sabuuradda la soo saaray dhulka, ka dibna la dul saaro lakabka milicsiga ee warqadda biraha aluminiumka ah. Ugu dambayntii, mesh birta birta ah ayaa la dhigaa, ka dibna tuubooyinka iyo fiilooyinka waa ...
Baararka birta ah ee ka kooban kaabayaasha mustaqbalka | Dunida Composites
GFRP waxay tirtiraysaa halista daxalka waxayna kordhisaa cimri dhererka shubka la xoojiyay afar jeer si loo daboolo baahiyaha mustaqbalka sida taraafikada, magaalaynta iyo cimilada ba'an. #sidemanufacturing #frprebar #Kaabayaasha Mashruuca dib -u -dhiska ugu weyn ee GFRP. Qiyaastii 11,000 kiilomitir oo GFRP reba ...
Codsiyada ugu waaweyn
Hababka ugu muhiimsan ee adeegsiga siligga dashang ayaa hoos lagu bixiyay
Meesha Shaashadda Wareegtada Rotary
Tel:0086 318 7563319
Cel:0086 318 7521333
Maro naxaas Wire mesh